Green Way - ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အပိုင်း (2)
ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အပိုင်း (2)
အစိမ်းရောင်လမ်း 06/04/2018 14:40 PM Content Provider - Greenovator
(င) ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာနဲ့ သီးနှံပင် ရေအသုံးချစွမ်းရည်
• ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်အာဟာရဟာ အမိုနီယမ်မြေသြဇာများမှာပါတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်နဲ့ ဓါတုဖွဲ့စည်းပုံ (Chemical structure) မတူညီပါ။ ယမ်းစိမ်းနိုက်ထရိုဂျင်ဟာ သီးနှံပင်ရဲ့ ရေအသုံးချစွမ်းရည်ကို 100 % ပိုမိုကောင်းစေပါတယ်။
• ဒါအပြင် ယမ်းစိမ်းမှာပါတဲ့ ပိုတက်စီယမ်ကြောင့် သီးနှံပင်မှ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှု့ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ အပင်မှာပါတဲ့ အပေါက်ငယ်လေးများရဲ့ လေရှုပေါက် (Stoma) အပိတ်အဖွင့်စည်းချက်ဟာ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ များစွာ စပ်ဆက်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
• အမြစ်များ ရေစုပ်စွမ်းရည်ကိုလည်း ကောင်းစေပါတယ်။ ဆားပေါက်မြေများမှာ ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာသုံးပါက ရေသွင်းရေထုတ်လုပ်ရန်မလိုဘဲ ဆားဒဏ်ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တာမို့ ရေအခက်အခဲရှိတဲ့နေရာများမှာ သွင်းရေပမာဏကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
(စ) စိုက်ပျိုးမြေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကို တိုးတက်စေ
• သီးနှံပင်အမြစ်များတဝိုက် pH ခေါ် မြေချဉ်ငံဓာတ်ကို တိုးလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အက်ဆစ်မြေများမှာ အချဉ်ဓာတ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
• ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာဟာ မြေရဲ့ ဖော့စရပ်နဲ့ အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းကိုလည်း အားပေးပါတယ်။ မြေအတွင်း ကာဘောက်ဇလစ်အက်ဆစ်လို့ခေါ်တဲ့ အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ အမြစ်အတွင်းမှ မြစ်စစ်ထုတ်ရည်များ (Root exudate) များ ပိုမို ထွက်ရှိစေခြင်းကြောင့် အပင်မှ မရနိုင်ဘဲ မြေဆီလွှာအတွင်းကပ်ညှိကာ ပိတ်မိနေသော ဖော့စ်ဖရပ်စ်နဲ့ အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များ ဖော်ပြပါ အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များအတွင်း ပျော်ဝင်လာစေခြင်းဖြင့် သီးနှံပင်ဖော့စ်ဖရပ် စုပ်ယူအသုံးချမှုကို ကောင်းစေပါတယ်။
• ရေမှာ အလွယ်တကူပျော်ဝင်တဲ့အတွက် သွင်းရေနဲ့အတူ မြေသြဇာကျွေးခြင်း (fertigation) နဲ့ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်များ(foliar) မိမိဖာသာ လွယ်ကူစွာ ဖော်စပ်နိုင်ပါတယ်။
• အရည်ပုံစံအနေနဲ့ တည်ရှိနိုင်သော်လည်း အလွယ်တကူ ခဲသွားခြင်း၊ ပြင်ပမှ ရေငွေ့စုပ်ယူခြင်းများ မရှိပါ။
• အခြားမြေသြဇာများနဲ့လည်း တွဲစပ်သုံးလျှင် သဟဇာတဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပြုပြိုကွဲခြင်း၊ အာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း အလွယ်တကူမဖြစ်ပါ။
• အရည်ဖျော်စပ်ကာ ဖျန်းပက်သုံးရာတွင်လဲ နော်ဇယ်ခေါင်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်းမဖြစ်ပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ အပင်ကြီးထွားဟော်မုန်းများ၊ အားဆေးများနဲ့ မိမိနှစ်သက်သလိုအတွဲအစပ်နဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
• ယမ်းစိမ်းမြေသြဇာမှာ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း အငွေ့ပျံခြင်းမရှိပါ။ ကြဲပက် ပြီးနောက် မြေထဲသို့ ချက်ခြင်းရောက်စေရန် အလျင်စလိုထွန်ယက်ပေးခြင်း၊ မြေဖုံးပေးခြင်းများ လုပ်ရန်မလိုပါ။
Haifa, 2009. Haifa leaflet „Multi K -Your potassium of choice“, 2009. ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါတယ်။
ဆားခါးအား မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း
ဆပ်ပြာနဲ့ သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တွင် နွေစပါးရောင်းဈေး သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့
နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးခြင်း - ဦးကျော်နိုင် (အပိုင်း ၅/၅)
အညာဒေသ ဖရဲဈေးကွက်အဖွင့်လှ၍ တောင်သူများအဆင်ပြေ
ရေကာတာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်